I-Melexis iqala nge-sensor ye-Hall-effect sensor yombane encediswa ngumbane - I-Ocean-Components.com
IkhayaIindabaI-Melexis iqala nge-sensor ye-Hall-effect sensor yombane encediswa ngumbane
Ngobushushu obusebenzayo phakathi kwe-40℃ kunye ne-160 ℃, eyomeleleyo ithi isixhobo sidibanisa ulungelelwaniso oluphezulu kunye nokuzinza okuphezulu kwe-thermal, kubandakanya isiphelo esiphantsi kunye nokuziva okuqhubayo.
Kudala dukhuselwe njengesixhobo sokhuseleko ngaphandle kwemeko (SEooC), kunye ihambelana nomgangatho we-ISO 26262 kunye no-AEC Q-100 kwiBanga 0.
Ukuxhasa inqanaba lokhuseleko lomsebenzi olusebenzayo lwe-ASIL-C kwimodi yedijithali (i-SENT okanye i-SPC) kunye ne-ASIL-B kwimodi ye-analog, i-IC inokufumana ukusilela kwangaphakathi kwaye ingene kwilizwe elikhuselekileyo ukunqanda ukusebenza kwezithuthi okungalindelekanga.
Iphakheji ye-TSSOP-16 ikwabandakanya ukusweleka kokubini ukungafuneki ukwenza ukuba kuxhaswe ukhuseleko kwizicelo ezifana ne-steering and braking system.
I-IC-isiphumo seholo inokusetyenziswa kumacala okusebenzisa izithuthi kunye nokusebenza ngaphandle kokunxibelelana nendawo yokusebenza ezibandakanya ukuqhuba kweenjini zokuhamba, ukukhawulezisa, ukubopha, okanye ukubamba izinzwa zecala lokuhambahamba, owona mgama uphakamileyo womgangatho, izinzwa ezikwinqanaba lokudada, i-potentiometers ezincinci. indawo yokuva
Uluhlu lokulinganisa olunokuhleleleka kunye nokulinganiswa kwamanqaku amaninzi kuvumela ukuguquguquka, kwaye iintlobo ezahlukeneyo zeenkqubo zokukhuphela zenza i-IC enye ukuba isetyenziswe kwizicelo ezininzi.
Ikhowudi emfutshane ye-PWM yemigaqo yemigangatho ivumela imilinganiselo ukuba ithathwe kwaye idluliselwe ekufumaneni kwipulger yokuqalisa.
Oku kuthetha ukuya kuma-sensor amane ukuya kolungelelwaniso ukuya kuthi ga kwi-2kHz, enika amandla imilinganiselo efanayo yamagnetic kunye ne-latency yokugqibela.
Ukongeza, amabango e-Melexis, i-IC ifaka umlinganiso ophezulu wokuhlaziya kunye nengxolo ephantsi, enika amandla isantya esiphezulu se-loop.
Esi sixhobo sineenombolo ezingama-48 ezinokuchongwa ezinokuchongwa.
Ngaphakathi kobushushu obuqhelekileyo bokusebenza kunye nogqithiso oluqhelekileyo lokuhambisa umbane phakathi kwe-4,5-5,5, ubukhulu bayo obuqhelekileyo bexesha lewotshi eyi-24MHz ene-± 3.5% iyonke yokuqhutywa.
Isixhobo sinokugcina umbane wokubonelela we-28V ukuya kwiiyure ezingama-48 okanye ezingama-37V ukuya kwimizuzwana engama-60, nangona kunjalo inkampani ithi ukubhenca imeko ephezulu yamanqanaba okonyusa kunokuchaphazela ukuthembeka.